Ko Imwe Cycle YeSteroid Ichaita Chero Chinhu - BikeHike
Inguva yakareba sei steroid yako yekutanga inofanira kuva?
Inguvai yaunoona mhinduro kubva kune steroids?
Ndeipi yakanakisa steroid kune vanotanga?
Ndeipi yakanakisa steroid cycle?
Ko steroid inoshanda pasina kushanda kunze?
Ungaziva sei kana mumwe munhu ari kutora steroid?
Iwe unogona kuwana yakakura sei pasina steroids?
Chii chinoitika kana ukarega kutora steroid?
Iwe unofanirwa kutenderera testosterone kwenguva yakareba sei?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti testosterone enanthate ipinde mukati?
Chii chakanaka kutenderera kwehuwandu?
Unogona here kumhanya Tren uye Deca pamwe chete?
Vese pro bodybuilders vanoshandisa steroids?
Unogona kuwana matanhatu paki pasina steroid?
Vanovaka muviri vanokura sei?
Iwe unobatwa sei ASAP?
Zviri nani kuva mukuru kana kuonda?
Ndingaite sei kuti ndiwane shredded abs?
Ko mabuff dudes anotora steroid?
Kazhinji, vashandisi vanotora steroid kwemavhiki matanhatu kusvika kumavhiki e16 panguva, inoteverwa nemavhiki akati wandei ekutora yakaderera madosi kana pasina steroid zvachose. Vamhanyi vanoziva kuti vachaongororwa - semuenzaniso, panguva yechiitiko chakati kana makwikwi - vanoisa nguva yavo kutenderera vachitarisira kupasa bvunzo dzezvinodhaka.
Huchenjeri hwakagamuchirwa ndehwekuti testosterone inofanirwa kubaiwa vhiki nevhiki kweinenge 10 mavhiki. Zvakadaro musayendisiti wezvemitambo Robert Weatherby weSouthern Cross University muLismore, New South Wales, Australia, uyo akaita chidzidzo, akawana kuwedzera kukuru kwekuita kwakauya mushure memavhiki matatu chete.
- anavar (oxandrolone) ndiyo yakachengeteka pane ese steroids kune vanotanga, nayo ichinyanya kupfava kupfuura testosterone. Zvakanakira anavar ndezvi: it. Sezvo anabolic steroids inogona kuwedzera mhasuru, inogona kuva imwe nzira inogona kuita. Zvisinei, kungofanana nemamwe ose oral steroids, inonyanya kutyisa chiropa.
Anavar ingangove yakanakisa steroid yekurasikirwa uremu, yakanakisa steroid kutenderera kwekuonda bulking. Anavar yakakurumbira pakati pevanovaka muviri nekuti inoshandawo se diuretic saka iwe unorasikirwa nemvura zvakare, akanakisa steroid mapiritsi ekuwana tsandanyama. Kune avo vauri kutsvaga iyo crisp uye yakaoma kutaridzika kana iwe uri pachikuva, Anavar akanakira.
Anabolic steroids, inonziwo anabolic-androgenic steroids (aass), inogona kuvaka tsandanyama nekuvandudza mitambo yemitambo, asi inogonawo kuva nemigumisiro yakaipa, kunyanya kana yakashandiswa. Steroids ichaita kuti uve mukuru, nekukurumidza, kusimba, uye kuwedzera neuromuscular chiitiko kunyangwe pasina kushanda kunze.
Zviratidzo zveSteroid Shandisa Acne. Kukurumidza tsandanyama/kurema kuwedzera. Mazamu akakurisa (muvarume) Paranoia. Hyperactivity. Kukura kwebvudzi rechiso (muvakadzi).
FFM: (bodyweight x (100 - bodyfat percentage in%)) / 100 ∆ Vakagumisa kuti vatambi vasingatore anabolic steroids vane Index yepakati pe25 pa max. Vashandisi veSteroid vanogona kudarika kukosha ikoko, kazhinji nezvakawanda. Izvi zvinotungamira kune fungidziro yekuti iyo FFMI yeanosvika makumi maviri neshanu muganho wechisikigo.
Kushandiswa kweSteroid hakugone kumira kamwe kamwe; kutapa mushonga kunopa adrenal glands nguva yekudzokera kune yavo yakajairika maitiro ekuvanzika. Zviratidzo zvekurega uye zviratidzo (kushaya simba, kuneta, kuderera kwechido, kupera uremu, kusvotwa, kurutsa, manyoka, kurwadziwa mudumbu) zvinogona kutevedzera mamwe matambudziko mazhinji ekurapa.
Iko kusanganiswa kweamino acids inogadzirwa nechiropa, itsvo, uye pancreas. Creatine haisi steroid - inongowanikwa mumhasuru uye munyama tsvuku nehove, kunyangwe iri padanho rakaderera kupfuura mufomu yehupfu inotengeswa pamawebhusaiti ekuvaka muviri uye kuGNC yako yenzvimbo.
Mhedziso yakawanda ndeyokuti kutungamirirwa kwe testosterone kune vane hutano, varume vakuru kwemavhiki e52 (1 gore) kutevera kutenderera kwemavhiki e4 ekutonga kwe testosterone uye mavhiki e4 pasina testosterone (kureva, mwedzi wemwedzi webhaisikopo) ichapa zvibereko zvakafanana musimba remhasuru, huremu hwemhasuru, uye kuwanda kwepfupa sechiyero.
Kushandiswa kwe testosterone enanthate kwakaratidzwa kuwedzera zvakanyanya simba mukati memavhiki e6-12 ekutonga (2, 9), zvisinei, hazvizivikanwi kana zvikomborero zveergogenic zvinoonekwa mumasvondo asingasviki 6.
1) D-Bal naCrazy Bulk Saka hazvishamisi kuti D-Bal ndeye Crazy Bulk inotengeswa zvakanyanya kuwedzera. Kuzvipira kwavo mukuvandudza chigadzirwa chavo uye kugadzira chimwe chinhu chinokubatsira kuvaka tsandanyama nenzira yakachengeteka uye inoshanda ndosaka tichifunga kuti D-Bal inonyatsokodzera nhamba-imwe nzvimbo pane yedu runyorwa.
Chekutanga, iyo inonyanya kushanda yakawanda bulking cycles kazhinji inokwana 3-4 mwedzi, kana isiri refu. Ikoko izvi zvinogona kuomera vamwe vanhu ndezvekuti kunyangwe iwe uri pamusoro pemacronutrients yako, iwe unogona zvakare kuwana mamwe mafuta uchiwana tsandanyama mukutenderera kutenderera.
Inogona Kuiswa Deca NeTren? Hungu, inogona uye inoshanda zvakanaka pakuunganidza. Kukura uye simba rinowanikwa richawedzerwa kusiyana nekumhanya tren chete. Migumisiro yacho haizove yakanyanya kuoma, kana ichienzaniswa nekuita tren-chete kutenderera (kunze kwekuwedzera testosterone kudzvinyirira).
Nepo kushandiswa kunoratidzika kunge kwakajairika pakati pevakwikwidzi vemiviri - 54 muzana avo vanotora steroid, imwe ongororo yakawana - haina kuganhurirwa kune iyo huwandu.
Ndinogona kuvaka tsandanyama uye kukura pasina steroids? Mhinduro ndihongu. Zvisinei, nepo mushandisi we steroid ari kunyanya kukura pasinei nokuti rudzii rwekudzidzisa kwaanoita, musimudzi wepanyama anoda kutamba zvakanyanya kunyatsotarisa kuti anoshandisa sei, zvipi zvinowedzera kushandisa uye sei / nguva yekudya.
Nekushanda kupfupi asi kwakanyanyisa uye nguva yakawanda yekupora, havawedzere, asi kupa mhasuru nguva yakawanda yekuzorora nekukura. Mhedzisiro ndeyevagadziri vemuviri vanokwanisa kuzadzisa yavo genetic kugona kwekugadzira yakanyanya kuonda muviri uremu uye chimiro.
Yako Yakazara Gwaro reKubvarurwa Danho 1: Simba Chitima Kuvaka Tsandanyama. Danho 2: Cheka Macalorie Kuti Urase Mafuta. Danho rechitatu: Idya Mapuroteni Akakwana. Danho 3: Idya Mwero Pakati Pemafuta Ane Utano. Nhanho 4: Edza Carb Cycling. Danho 5: Shandisa Chikamu Chekutonga. Nhanho yechinomwe: Wedzera Yakakwira-Intensity Interval Training (HIIT) Danho rechisere: Wana Kurara.
Muviri wakaonda uri nani pane muviri wakakura nekuda kwezvikonzero izvi: Inochinjika zvakanyanya, inokupa chimiro chechimiro chinotaridzika. Inowanikwa nekurasikirwa kwemafuta ekunze kuratidza mhasuru yepasi. Muchinyorwa chino, iwe uchadzidza nezve hutano hwemhando dzemiviri miviri, maitiro ekuzviwana uye kuti ndeupi waunoda.
Heano 8 nzira dzakareruka dzekuwana matanhatu-pack abs nekukurumidza uye zvakachengeteka. Ita Zvimwe Cardio. Govera paPinterest. Rovedza Abdominal Muscles. Wedzera Kudya Kwako Kweprotein. Edza High-Intensity Interval Training. Stay Hydrated. Rega Kudya Chikafu Chakagadzirwa. Cheka Pakare paRefined Carbs. Zadza paFiber.
Kushandiswa kweSteroid hakungogumiri kune hombe buff dudes. Vazhinji vadiki vakomana vanotora steroid kuti vaedze kuramba vakanyunguduka uye kuwana kuonda mhasuru.
Nzira Yekutenderera Steroids
Mashandisiro Anoita Steroids Kuenda Kumwedzi
Mubvunzo: Inguva Yakadii Kutenderera Steroids
Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekutenderera Steroids Zvakachengeteka
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Steroids Inogona Kukanganisa Kuenda Kumwedzi
Masteroid Anogona Kuchinja Kuenda Kumwedzi
Mubvunzo: Ko Cycle Trader Inodhura Chero Chinhu
Mhinduro Yekukurumidza: Inodhura Sei Kutenderera KwemaSteroid
Mubvunzo: Unogona Nguva Yakadii Kutenderera PaSteroids
Yakareba Sei 1 Cycle YeSteroids
Mubvunzo: Unofanira Kufamba Kwenguva Yakadii Kubva Steroids
Yakawanda Sei Yekutenderera KweSteroids